Rita, Writing for My Sake!: လူ နဲ့ ဒိုင်ယာရီ
Posted by Rita at 6/27/2010 08:57:00 PM
ဇွတ်ကြီးကိုပဲ အားတက်သရော။ စောစောစီးစီး လာထောက်ခံတယ်။
စည်သူလွင်ကို အမှတ်တမဲ့.. ပို့စ်ခေါင်းစဉ်မြင်တော့ "လူနဲ့ အကျီင်္" သီချင်းလေးကို သတိရမိတာ။
မှတ်ချက်။ ။ ဥ နှင့် ညကလေး သည်းခံပါ။
ရီတာ.... ဒီပုံနဲ့ဆို မော်ဒယ် လုပ်စားလို့ ရပြီ။
စင်ဒန်လား....အင်္ကျီလို့ ရေးရတယ်ကွဲ့။ “င်္ီ” အတွက် ကီးအမှန်ကိုလည်း မသိဘူးမဟုတ်လား။း-)
အေးနော် ငါတို့ကကြောင်တောင်တောင်နဲ့ သူတို့ကတက်ကြွနေကြတာ အားတောင်နာတယ်..
ခါးကြီးထောက်ပြီး တယ်လှပနေပါလား =D
ရီတာ ကလည်း လှတာ ပိန်ပိန်လေး မော်ဒယ်ဂဲလ် လုပ်ရင် ရပြီ
အဲ့ဒီ အိပ်ကို ဘယ်လို ခြစ်လိုက်တာလဲ ပြောပြ
word မှာ ပဲ ရတယ်
ဘလောခ် ပေါ်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ မသိဘူး
ရီတာက သေးသေးငယ်ငယ်လေးပဲ....အမနဲ့ နှစ်ယောက် ရောကျိုလိုက်ကြရအောင်....:)
ငယ်ငယ်ကတော့ လက်ရေးသိပ်မဆိုးဘူးထင်တာပဲ။ အခုများတော့ လက်ရေးနဲ့ မရေးတာကြာ၊ ရေးလိုက်ရင် ကိုယ့်လက်ရေးကိုယ်တောင်မမှတ်မိတော့ဘူး.. ကြောက်ခြစ်ထားသလိုပဲ။ :D
လုပ်လက်စ အလုပ် တခုမှ မရှိပေမယ့် အာရုံရနေလို့ လာလိုက်တာ... ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ။ အလုပ်သစ်တွေ ရောက်လာတယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့ နယ်မှာ သူငယ်တန်း ဆရာမက လေးကြောင်းမျဉ်းနဲ့ လက်ရေးလှသင်တာ ခံခဲ့ရတာ။ နောက်တော့လည်း ခုလို လက်ရေးဖြစ်သွားတာပါပဲ။
ကျောင်းပြီးလို့ TTC က လေးတန်းကလေးကို စာသင်ရတုန်းက လက်ရေးဆိုးလွန်းလို့ TTC ကို အတော် စိတ်ကုန်မိတယ်။ တခြား ကျောင်းဆို မပြောပါဘူး။ လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ဖြစ်နေပြီးတော့ ဆိုပြီး...
ဒါပေမဲ့ ကြီးလာတဲ့အခါ ဒီလက်ရေးကို သုံးစားစရာ နေရာလည်း မရှိမှတော့ ဘာမှ မထူးပါဘူး။
ဇွန်ရှစ်တန်းတုန်းက မြန်မာစာဂုဏ်ထူးမထွက်လို့ (လက်ရေးမလှလို့ထင်ပြီး)နွေကျောင်းပိတ်မှာ လေးကြောင်းမျဉ်းနဲ့ ပြန်ကျင့်ယူလိုက်တာကို အမှတ်ရသွားတယ်။ ဆယ်တန်းမှာတော့ ဂုဏ်ထူးရသွားပါတယ်။ ခုတော့ စာမရေးတာကြာလို့ လက်ရေးတောင် ပျက်နေလောက်ပြီ။ :D
ကို ကို စန်း said...
နေပြည်တော်က ကြွက်တွေတော့ ပြေးကုန်ပြီ
Orchard Road က ကြွက်တွေတော့ ဘယ်တော့ ပြေးမလဲမသိဖူး (ဓါတ်ပုံကြောင့် မဟုတ်ပါ ) - ရေကြီးလို.
စန်း ၁၀တန်းတုန်း က လက်ရေးမလှ ၊ စာမရလို. လက်ရေးသေးသေးလေးတွေကို စာရွက်မှ ရေး ၊ စာမေးပွဲခန်းထဲယူသွားပြီ ခိုးချတာ ၁၀ တန်းကို ဘာသာစုံ အောင်မှတ် ရရုံလေးနဲ. အောင်ခဲ့ပါတယ် ၊
;) ခေါင်းစဉ်က သီချင်းခေါင်းစဉ်ပဲဗျ
း) ခွင့်ယူပြီး အပီသာနား ဟိဟိ အားပေးတယ် တခါတလေ အရမ်းနားချင်တတ်တယ် အဲ နားပြန်တော့လည်းနှစ်ရက်ပြည့်သေးဖူးပျင်းပြန်ရော လေ
1။ ညွတ်ကွင်းများအတွက် ကွန်မက်
Labels: Shit, အလုပ်ပိုတွေ
၂။ တယ်လီဖုံးပိုစ်ဘယ်ရောက်သွားသလဲ ဘာဖြစ်လို့ဖယ်လိုကတာလဲ.။
၄။ ပရိသတ်တောင်းဆိုတဲမောင်ကိုဘာလို့ဆက်မရေးတာလဲတဲ့။အဲဒါက သူများရဲ့ပြင်ပကွန်မက်. ကိုဒီယူလာတာ။
ငွေမင်သုတ်ရင်တော်ရော့ပေါ့.. စိစစ်ရေးရယ်.. စာရွက်ကြီး ဖြဲပစ်တယ်လို့.... ။